We Fight We Win. -- " More than Media ": ၈၈ သတင်း
ဒီကနေ့ နေ့လည် ၂း၀၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ အထိ ဝေဇယန်တာလမ်းရှိ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်းတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ Ms. Lucy Antrobus, the University of Hong Kong မှ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းနဲ့ ပက်သက်သော ကိစ္စများကို မည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းရမည်နည်း ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုစိုးထွန်း၊ ကိုကိုကြီး(စမ်းချောင်း) တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မင်းတို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကလည်း မင်းတို့ငွေမပါ အများပြည်သူဆီက ငွေတောင်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ပါပဲ။ အဲဒီလိုမျိုးကတော့ သူတောင်းစားတောင် လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကြားကောင်းအောင် အမည်ရအောင် လုပ်မနေကြပါနဲ့။ ၈၈ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်တွေ ပျောက်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ။ ပါတီလက်ကိုင်တုတ်တွေအဖြစ် ရပ်တည်ချင်နေကြရင် ၈၈ အမည်ကိုခံယူမနေကြနဲ့။ ပြည်ပမှာလည်း ၈၈ စစ်စစ်တွေက မင်းတို့လို ၄၊ ၅၊ ၆ ယောက်မကဘူး။ ထောင်ချီရှိနေကြသေးတယ် ဆိုတာကို မင်းတို့သဘောပေါက်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်။
what the meaning of real 88 from oversea???? ha ha shame on you. no real 88 in oversea. know yourself.
you sound very jealous to them. you show your standard in your comment.